Izindaba - Hlaziya izingqinamba ezimbili ezinkulu ezidinga ukulawulwa ekukhiqizeni i-Stainless Steel Castings
Hlaziya Izinkinga Ezimbili Ezikhulu Ezidinga Ukulawulwa Ekwenziweni Kwokusakazwa Kwensimbi Engagqwali
Ukubunjwa kokugcina kwe-castings kwenziwa kakhulu ukupholisa nokuqina kwensimbi engamanzi. Enqubweni yokukhiqiza yokusakaza, uma inqubo yokusakaza ingafundile, ikhwalithi yabalingisi izobe ingekho emgqeni, okuzothinta ukusebenza kwensizakalo yabalingisi kanye nempilo yesevisi yabalingisi. Ngakho-ke, izici ezimbili zokulawula zidinga ukunakwa kunqubo yokukhiqiza yokusakaza.
(1) Ukulingisa ukunemba okuyizilinganiso kanye nokulawulwa kobuso bendawo
Emkhakheni wezokukhiqiza wanamuhla, izidingo zokunemba nekhwalithi yokuphosa ziya ngokuya zanda. Ubuchwepheshe bokubumba obusondelene nenetha boshintshe umqondo wendabuko wokuthi ukusakaza kunganikeza izikhala kuphela. Inhloso ukunciphisa ukusetshenziswa kwempahla, ukusetshenziswa kwamandla, ukusetshenziswa kwabasebenzi, nokwenza ngcono imikhiqizo. Ikhwalithi yangaphakathi nangaphandle yenkampani izabalazela imakethe nokusebenza kahle okuphezulu. Kodwa-ke, ngenxa yethonya nokuvinjelwa kwezinto eziningi, ukunemba kobukhulu nobukhulu bendawo yokuphosa kunzima ukuyilawula. Ama-castings akhiwa ngendlela ewuketshezi. Inezinzuzo ezihlukile zokuzuza ukwakheka okusondele-kwenetha. Ngokwesakhiwo, umgodi wangaphakathi nokwakheka kokujikijelwa kwakhiwa ngasikhathi sinye ngokusakaza izindlela zokubenza basondele esimweni sokugcina sengxenye, ukuze inqubo yokucubungula neyomhlangano incishiswe; Ngokuya kokunemba kobukhulu nekhwalithi yendawo, ukusakaza kungasondela kuzidingo zokugcina zomkhiqizo, ngemajini noma imajini encane; ngakolunye uhlangothi, ukugcinwa komhlaba wokuqala ogciniwe kuyazuzisa ukugcina ukusebenza okuphakeme kokuphonsa okufana nokumelana nokugqwala nokukhathala. Ngaleyo ndlela sithuthukisa impilo yomkhiqizo.
(2) Ukwakheka nokulawulwa kokhristali nokwakhiwa kokuqina
Ukwakheka kwensimbi engamanzi, ukwakheka nokukhula kwe-crystal nuclei, ubukhulu, ukuqondiswa kanye ne-morphology yama-crystal grains kuhlobene kakhulu nokwakhiwa kokuqina kokuphonsa, futhi kunomthelela omkhulu kuzakhiwo zomzimba nezomshini zokusakaza. Inhloso yokulawula ukwakheka kokuqina kokuphonsa ukuthola isakhiwo osifunayo. Ukulawula ukwakheka kokuqina, kuyadingeka ukuthi ube nokuqonda okuphelele nokutadisha okujulile kwendlela yokwakheka kwayo, inqubo yokwakheka nezici ezinomthelela. Izindlela ezisungulwe zokulawulwa kwezicubu ezisebenzayo zifaka ukonakala, inoculation, ukwakheka okunamandla, ukulandelana okulandelanayo, kanye nokuqina okusheshayo.
Ekhiqizweni lokusakazwa, ukulawula lezi zici ezimbili ezingenhla kungaqinisekisa ukwakheka nokunemba kobukhulu bokuphonsa, kunciphise izindleko ngezinga elithile, futhi kulwele izinzuzo zemakethe.
Isikhathi Iposi: Oct-08-2021